Khabar Kantipur » वैशाख २२ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल…..
वैशाख २२ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल…..
अनुभवले ज्ञानको दायरा बढ्नेछ भने रचनात्मक कामले आम्दानीको दिगो स्रोत जुट्न सक्छ । स्थापित व्यवसाय, कृषि कर्म र उद्योगधन्दालाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । बिना कारण अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ला । आयआर्जनका स्रोत प्रशस्तै भेटिनेछन् । व्यवसायमा सोचेभन्दा बढी सफलता मिल्नेछ ।
पार्टी, पिकनिक वा खानपान समारोहमा सहभागी भइएला । कर्मयोगमा अभिवृद्धि हुनेछ । पैत्रिक सम्पत्तिमा विवाद आउनुका साथै दाजुभाइमा भागबन्डाको समय छ । व्यवसाय र कृषितर्फ लगनशीलताले ठूलो काम बन्न सक्छ । सहकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । बिना कारण आफन्तजनबाट टाढिनुपर्नेछ ।
प्रियजनसँग भेटघाट र प्रसन्नताको समय छ । विभिन्न उपहार समेत पाइएला । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइनेछ । राहुको प्रभावले विवाद, धनहानि, लाञ्छना जस्ता समस्या आउन सक्छन् । पारिवारिक असमझदारी, बन्धुबान्धवसँग मनमुटाव र छटपटी बढ्ने देखिन्छ । सामाजिक प्रतिष्ठामा कमी आउनेछ ।
आँटले जटिल काम समेत सम्पादन हुन सक्छ । आशा मारेको काम बन्नाले उत्साह बढ्नेछ । पारिवारिक समस्याहरू देखा पर्नेछन् । साझेदारीमा विवाद र पतिपत्नीमा असमझदारी बढ्नेछ । शिक्षा र साझेदारीमा फाइदा हुनेछ । परोपकार र मङ्गलमय काम सम्पादन गरिएला । मान सम्मान पाइनेछ ।
प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । रमाइलो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ । भ्रमणका बीच मान सम्मान पनि प्राप्त हुने समय छ । पेट र छाती सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्छ । विद्यार्थीहरूका लागि अनुकूल समय छ । बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै पढाइमा प्रगति हुनेछ ।
तर्क शक्ति बढ्नुका साथै बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने मौका आउला । प्रयत्न गर्दा अध्ययनका लागि विदेश यात्राको सम्भावना छ । समाजसेवा र परोपकारका कार्य गरिनेछ । आयआर्जनको कमीले ठूलो प्रगतिमा बाधा पुग्नेछ । नयाँ उद्योगधन्दाको थालनी गर्न सकिनेछ । नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति सम्भावना छ ।
सहयोगीहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा समस्या देखा पर्नेछ । सन्तानबाट फाइदा र सुख मिल्ने योग छ । रोकिएका काम सुरु हुनेछन् । स्वास्थ्यमा बाधा, काममा झमेला र आफन्तबीच असमझदारी बढ्ने देखिन्छ । झुटा आरोप आइलाग्नेछन् । बाहिरी यात्रा र प्रवासमा हुनेहरूलाई समय निकै अनुकूल देखिन्छ ।
धेरै परिश्रमबाट थोरै लाभ मिल्ने योग छ । घर खर्च पनि बढ्नेछ । ठूलो लगानीबाट कम मात्र फाइदा हुनेछ । साना व्यक्तिको सहयोगले ठूलो फाइदा उठाउन सकिनेछ । बौद्धिक प्रभाव बढ्नुका साथै विभिन्न अवसर पाइने समय छ । जीवनसाथी र सन्तानका तर्फबाट भौतिक सम्पत्ति लाभ हुनेछ ।
व्यवसायमा केही उतारचढाव आए पनि अन्ततः फाइदै हुनेछ । साथीभाइले साथ दिनेछन् । पढाइमा अनुकूल समय छ । नयाँ नोकरी प्राप्ति वा पदोन्नति सम्भावना छ । व्यापार व्यवसाय विस्तार हुनेछ । विश्वासमा पारेर धोका दिनेहरूले सताइरहनेछन् । रोकिएका काम बन्न थाल्नेछन् ।
साझेदारीमा पनि सम्बन्ध बिग्रनाले यदाकदा अप्ठ्यारोमा परिनेछ । परिश्रमबाटै घर जग्गा वा स्थिर सम्पत्ति जोड्ने समय छ । स्थायी सम्पत्ति आर्जन गर्ने समय छ । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ । मान सम्मान पाइनेछ । जीवन साथीबाट पाइने साथ र सहयोगीहरूको मद्दतले काम सहजै सफल हुनेछन् ।
बुद्धिको उपयोगले काम लिने समय छ । प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै विशेष अवसर हात पार्न सकिनेछ । स्थायी सम्पत्ति जोड्ने समय छ । नयाँ नोकरी, पदोन्नति वा अनुकूल स्थानान्तरण सम्भावित छ । बोलीको गलत अर्थ लाग्ने, विवादमा परिने र आर्थिक संकटले सताउने योग छ । शक्तिमा अंकुश लाग्नेछ ।
भाग्य बलवान् रहनेछ । रमाइलो यात्राका बीच आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइनेछ । व्यवसाय मूलक भ्रमण गर्ने समय छ । कृषि र पशुपालनमा सामान्य र उद्योग तथा व्यापारमा राम्रै लाभ मिल्ने देखिन्छ । आम्दानीका विभिन्न माध्यम फेला पर्नेछन् । सामाजिक पक्ष सबल बन्नुका साथै मान सम्मान पनि पाइनेछ ।
प्रकाशित मिति May 4, 2021
बैसाख २४ गते शुक्रबारको राशिफल….माता लक्ष्मीको दर्शन गरि हेर्नुहोस,…!
बिवाह मण्डपमा खाएको कसम पुरा गरे बैतडीका एक प्रेमीले…
ग’र्भमा छोरा छ कि छोरी पत्ता लगाउने घरेलु तरिका यस्ताे छ “जानी राख्नुहोस”
फेरिपनि पेटमा छो’री हुनसक्ने भन्दै श्रीमानले गर्भ’वती श्रीम’तीको पेटनै का ‘टिदिए !
जन्मदै मरेको भए सहन्थे, छोरी अगतिलो हुनाले धेरै दु:ख पाए … (भिडियो हेर्नुस्)
७ दिनमा कोरोना च्वा टै हुन्छ , १५ दिनमा ल कडाउन खुल्छ, केपी बा मेरो औ ष धी प रिक्षण गरम तपाइको १० बर्ष आयु बढ्छ भन्दै ( भिडियो हेर्नुुस्)
दुखद खबर : ६ दिन अघि ICUनपाएर म’रिन्छ कि भनेर पोस्ट गरेका लक्ष्मण अब हामी माझ रहेनन् !
कार हल्लिरहेको देखेर प्रहरी पुग्दा भित्र जोडी म स्त, प्रहरीसँगको बयानले झनै च कित ब नायो
शरिरभरि जिउदै आगो लाग्यो , डडेको शरीर लिएर आमा रुदैरुदै यस्तो भन्नुहुन्छ (हे,र्नुस् भिडियो )
यी कस्ती बहिनी! दिदीको दुःख देखेर बहिनीले भिनाजुको ग र्भ बोकिन
मुख्यमन्त्री अस्पताल बाहिर बाेल्दै थिए, भित्र एकजनाकाे अक्सिजन नपाएर मृ’त्यु…!
अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको श,व फेला….!
स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको पत्र : निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्नु….
अक्सिजनको अभाव भईरहेको बेला, अक्सिजनको सिलिण्डर बोकेको ट्रक दुर्घटना….!
नेपालमा पहिलपटक कोरोना संक्रमणबाट मन्त्री काे नि’धन !
कतारमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएपछि श्रमिक आन्दोलित…….
मेयर-उपमेयरले बनाए आफु चढ्ने गाडीलाई एम्बुलेन्स; भन्छन बरु म साइकल मै हिँड्छु…..
मेयर रेणु दाहाल नेतृत्व भरतपुर महानगरले गर्यो घरबाटै बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउने व्यवस्था…!
संक्रमितसँग दैनिक ५० हजारसम्म असुल्दै ह्याम्स अस्पताल…..
सक्रिय संक्रमित….काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै……३० हजार नाघ्यो……!
© 2018 - सर्वाधिकार सुरक्षित @ khabarkantipur.com